Maraykanka oo barwaaqo u ballan qaaday Kuuriyada Waqooyi - BBC News Somali
Maraykanka oo barwaaqo u ballan qaaday Kuuriyada Waqooyi
Image caption Xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka
Xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Maraykanku uu kuuriyada waqooyi gacan ka siinayo dib u dhiska dhaqaalaheeda haddii xukuumadda Pyongyang ay ogolaato in ay joojiso hubkeeda Nuclear-ka.
Mr Pompeo ayaa hadalkaan sheegay kadib markii uu kulan kula qaatay magaalada Washington dhiggiisa kuuriyada koonfureed.
Wuxuu dhawaan kasoo laabtay booqasho uu ku tagay Pyongyang taas oo uu ku sheegay in uu wadahaddalo diirran la sheegay hoggaamiyaha kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
Xoghaye Pompeo ayaa sheegay in uu wadahaddalo heer sare ah la yeeshay Kim Jong Un, kuwaas oo ku saabsan go'aanada istiraatiijiga ah ee horyaal, iyo in hoggaamiyaha Kuuriyada waqooyi uu diyaar u yahay in uu faraha ka qaado dhammaan hubkiisa Nuclear-ka asagoo ku baddalanaya ballanqaadyo loo samaynayo.
Waxa uu sheegay in taasi ay u baahnaan doonto barnaamij xooggan oo caalami ah. Taas oo loo baahan yahay in ay u dhacdo si dhakhso ah. Balse waxa uu sheegay, haddii taasi ay dhacdo, in Maraykanku uu kala shaqayn doono Pyongyang sidii ay ugaari lahayd hormar iyo barwaaqo si lamid ah Kuuriyada Koonfureed.
Kim Jong Un ayaa caddeeyey in dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi ee sii burburaya uu yahay kan leh mudnaanta koowaad.
Mr Pompeo ayaa sheegay in labada dhinac ay is afgarad wanaagsan ka gaareen danaha ka dhexeeya, ayna aragti iskumid ah ka qaateen gacanka Kuuriya.
Xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegaya in siidaynta Kuuriyada Waqooyi ay siidaysay saddex maxbuus oo Ameerikaan ah ay gacan ka gaysanayso qabsoomidda kulan taariikhi ah oo bisha soo socota dhexmari doona Donald Trump iyo Kim Jong-un.
Mr Pompeo ayaa sheegay in Mustaqbal ifaya uu sugayo Kuuriyada waqooyi haddii ay qaaddo tallaabooyin dhiirran oo ku aaddan dhimista hubka Nuclear-ka.